नेपालमा नयाँ सङ्क्रमित १८९ थपिए – १४०१ जना सङ्क्रमित, ७ जनाको मृत्यु – Online National Network
नेपालमा नयाँ सङ्क्रमित १८९ थपिए – १४०१ जना सङ्क्रमित, ७ जनाको मृत्यु
१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार १४:५२
काठमाडौं, १७ जेठ — नेपालमा थप १८९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या १ हजार ४०१ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित लाइभ अपडेटमा नेपालमा हालसम्म १ हजार ४०१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले हालसम्म कोभिड-१९ पुष्टि भएका व्यक्तिको संख्या १ हजार ४०१ पुगेको जानकारी दिएका हुन् । डा देवकोटाका अनुसार नयाँ थपिएका संक्रमित मध्ये १ सय ८५ जना पुरुष र ४ जना महिला रहेका छन् ।
डा देवकोटाका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौं मा गरिएको परीक्षणमा १ सय २४ जनाको पोजेटि भएको छ । उनीहरुमध्ये धनुषाका ७ जना २० देखि ४२ वर्ष उमेर समुहका पुरुष रहेका छन् । यस्तै झापाका एक जना ४५ वर्षीय पुरुष, कपिलवस्तुका ७७ जना १६ देखि ६० वर्ष उमेर समुहका पुरुषहरु रहेका छन् । यस्तै ललितपुरकी एक जना २३ वर्षीया महिलामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
तेसैगरी महोत्तरीको ४ जना २५ देखि ५५ वर्षीय पुरुषहरु, रौतहटका ६ जना १८ देखि ४५ वर्षीय पुरुषहरु, सर्लाहीका १७ जना १६ देखि ४० वर्ष उमेर समुहका पुरुषहरु र सिराहाका ११ जना १७ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका पुरुषहरु रहेका छन् ।
तेसैगरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रुपन्देहीमा गरिएको परीक्षणमा २६ जनामा कोरोना पोजेटिभ आएको छ । उनीहरु कपिलवस्तुको यशोधराका १६ देखि ५० वर्ष उमेर भित्रका पुरुषहरु रहेका छन् ।
यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको परीक्षणमा ९ जनाको पोजेटिभ आएको छ । उनीहरु सप्तरीका १८ देखि २८ वर्षका एक जना महिला र ८ जना पुरुष रहेका छन् ।
यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा ८ जनाको पोजेटिभ आएको छ । उनीहरु विजयनगर कपिलवस्तुका २६ देखि ५२ वर्ष उमेर भित्रका ३ जना हापुरे दाङका एकजना ३० वर्षीय पुरुष, बगलाचुरी दाङको ४ जना २७ देखि ३८ वर्षीय पुरुष र २८ वर्षीया एकजना महिला रहेकी छन् ।
यसैगरी नारायाणी अस्पताल वीरगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा ३ जनामा पोजेटिभ आएको छ । उनीहरु बाराहर्दियाका २४ वर्षीय पुरुष, पर्सा बसौनीका २ जना १८ र ६० वर्षीया महिला रहेका छन् । यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा १४ जनाको पनि कोरोना पोजेटिभ आएको छ । उनीहरु सबैजना दैलेखका १४ देखि ५० वर्ष उमेर भित्रका पुरुषहरु रहेका छन् ।
यसैगरी कोशी अस्पताल विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा २ जनाको पोजेटिभ आएको छ । उनीहरु संखुवासभा खादबारीका एकजना २३ वर्षीय पुरुष र संखुवासभाकै पाँचकपनका २२ वर्षीय पुरुष रहेका छन् ।
यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या एक हजार ४ सय १ पुगेको छ । जसमध्ये १ हजार २ सय ८८ जना पुरुष र १ सय १३ जना महिला रहेका छन् । उनीहरुमध्ये २ सय १९ जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने ६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा १३ जना कोरोना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् । योसँगै हालसम्म २१९ पुगेको छ । १७२ जना पुरुष र ४७ महिला रहेका छन् । हालसम्म ५३ जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट ६६ हजार ७२९ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ । जसमध्ये पछिल्लो २४ घण्टामा पीसीआर विधिबाट २५७५ जनाको परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट दैलेखमा एक जनाको मृत्यु
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कारण दैलेख, दुल्लु–११ का ३५ वर्षीय पुरुषको शनिबार विहान निधन भएको थियो । दिउँसो उनको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा युवकको नतिजा पोजेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालय विरेन्द्रनगर सुर्खेतले विज्ञप्ति जारी गर्दै पुष्टि गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने पुष्टि गर्न बाँकी रहेको छ ।
कोरोना संक्रमितको शब दुल्लुस्थित क्वारेन्टाइनमै छ । स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा आइतबारमात्र शव व्यवस्थापन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
१० दिनअघि भारतको गुजरातबाट आएका उनी शनिबार बिहान एक्कासी बेहोस भएका थिए । उनी ढलेको ४ घण्टापछि मात्र स्वास्थ्यकर्मीको टोली क्वारेन्टाइनमा पुगेको थियो । त्यतिबेलासम्म उनको मृत्यु भइसकेको थियो ।
मा एक जनाको मृत्यु भएको छ । दुल्लुस्थित विद्युत कार्यालयको क्वारेन्टिनमा शनिबार बिहान मृत्यु भएका युवकको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको हो ।
उनको कोरोनाका कारण मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ७ पुगेको छ । यसअघि कोरोनाका कारण नेपालमा ६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोककी २९ वर्षीया महिला, बाँके नरैनापुरका २५ वर्षीय युवक, गुल्मीका ४१ वर्षीय पुरुष, बारा कलैयाका ७० वर्षीय वृद्ध र ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २२ का एक जना पुरुष र अर्घाखाँची भुमिकास्थान नगरपालिका-९ एक जना पुरुष गरी ६ जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको पुष्टि भइसकेको छ ।
एचआइभी एड्सबाट १६ वर्षीया
के तपाई नियमित हस्तमैथुन गर्नुहुन्छ ? यदि हो भने यी कुरा जान्नै पर्छ !